Zimbabwe gets Covid-19 vaccine offers from Russia, China | theZimbabweNewsLive
HomeWorld NewsZimbabwe gets Covid-19 vaccine offers from Russia, China
HARARE – Russia and China have approached Zimbabwe about supplying vaccines to tackle its escalating Covid-19 outbreak amid concern about Harare’s ability to afford the shots, with plans for meetings with business leaders who have offered to pay for them.
Zimbabwe doctors’ groups say that hospitals are quickly filling up with Covid-19 patients and cite an increase in the number of infected people dying at home, unable to afford the steep fees charged by hospitals.
Zimbabwe has recorded a total 31 320 Covid-19 cases and 1 005 deaths – more than half reported since the beginning of this year, data released late on Sunday showed.
Zimbabwe is also in contact with the World Health Organisation’s Covax scheme set up to deliver shots to poor and lower-income countries. Harare hopes to use Covax to inoculate about three million Zimbabweans – or 20% of the population.